Ihe egwu egwu 7 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ekwentị mkpanaka abụrụla ihe nde mmadụ na-ejikarị eme ihe kwa ụbọchị, ọkachasị ndị anaghị ewepụta oge n'ihu kọmpụta, ebe ọ bụ isi okwu ha na nkwukọrịta yana ozi, ọ bụrụhaala na ka anyi jiri ngwa ndi kwesiri ekwesi.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka agwa anyị oge niile nke akụkọ kachasị ọhụrụ na isiokwu kachasị masị anyị, ọ dịghị mkpa ịbanye na ibe weebụ nke akwụkwọ akụkọ, mana anyị nwere ike iji ngwa ndị nwere ọrụ maka ịnakọta ozi ọma dika mmasi anyi n’ile n’ihu.
N'afọ gara aga, ọtụtụ n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a eguzobewo mgbidi ịkwụ ụgwọ, mgbidi nke na-egbochi ịnweta ozi ha na-enye, ya mere ha akwụsịla ịbụ, maka ọtụtụ ndị ọrụ, isi iyi nke ozi ileta.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere n'aka anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ ka a mata gị ozugbo banyere ihe niile masịrị anyị dabere na mmasị anyị. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ị na-eleta otu ibe weebụ mgbe niile na-achọ ozi dị mkpa, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị kacha mma ozi ọma ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo.
2 Nchọpụta Google
3 Akụkọ Microsoft
8 Arụsị na mgbasa ozi
Usoro Twitter, nke Facebook na nyiwe ndị ọzọ gbalịrị idetuo na-enweghị ihe ịga nke ọma, kwe ka anyị mara n'oge niile, kedu ihe bụ akụkọ kacha mkpa n'ụwa niile na mba anyị.
Na mgbakwunye, o nwere usoro ntụnye, nke dabere na akụkọ ndị anyị na-agbaso, na-enye anyị akụkọ ndị nwere ike ịmasị anyị. Site na hashtags, anyị nwere ike ịchọ nkọwa a kapịrị ọnụ na isiokwu, ndị mmadụ, ngwaọrụ, ụlọ ọrụ ...
N'agbanyeghi ihe Google News na Spain na-efu efu afọ ole na ole gara aga, nnukwu ọchụchọ ahụ na-eme ka Google Discover nweta anyị site na ngwa Google. Akụkụ a na-egosi anyị akụkọ metụtara akụkọ nchọgharị anyị, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike igosipụta nke bụ isiokwu kachasị na-adịghị amasị na-anakọta ozi banyere ya.
Otu n'ime ike nke ngwa a bụ na anyị nwere ike tufuo aro ndị ọ na-egosi anyị ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme ọfụma ha n'agbanyeghị na anyị na-atụgharị uche n'ime a isiokwu anyị họọrọ.
Dịka ọmụmaatụ, fim na-amasị anyị mana anyị anaghị amasị Angelina Jolie. Mgbe na-egosi ozi ọma banyere ihe a omee, site na ozi ọma nhọrọ họrọ M nwere mmasị na Angelina Jolie. N'ihi ya, a gaghị egosipụta akụkọ yiri ya ọzọ ya na onye omeegwu a n’isi akụkọ nke akụkọ.
Site na Microsoft News anyị na-achọta akụkọ na-agbasa na akụkọ zuru ezu n'aka ndị odeakụkọ kachasị mma n'ụwa. Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta usoro mgbasa ozi nke a ga-egosipụta na ndepụta anyị, gụnyere nhọrọ nke zoo akụkọ ndị ahụ na-amasịkarị anyị.
Ọ na-enyekwa anyị ohere ịchọ onyonyo site na igwefoto anyị site na itinye foto, lelee ihu igwe, egwuregwu, vidiyo na onyonyo nke ụdị niile, ọ gụnyere onye ntụgharị na onye na-agbanwe ego na ohere ịhọrọ site na nnukwu akwụkwọ ahụ aja. Microsoft dị maka gị budata n'efu ma gbakwunye mgbasa ozi.
Feeded bụ onye na-agụ RSS. Imirikiti ibe weebụ gụnyere ndepụta RSS, ebe a na-etinye njikọ nke akụkọ niile ha na-ebipụta. Anyị nwere ike ịgbakwunye ndepụta RSS a na ndepụta ka na-egosi anyị akụkọ niile site na isi mmalite ahụ na ngwa ahụ.
Dabere na isi ibe weebụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, ederede niile dị na ngwa ahụ, ya mere Ọ dịghị mkpa ka ị gaa na web na ajụjụ iji nwee ike ịgụ ya.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere hazie akara edemede niile site na otu, yabụ na anyị nwere mmasị na egwuregwu na teknụzụ, anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya ya mgbe anyị na-eche ịgụ akụkọ sitere na ụwa nke sinima na telivishọn.
Nri dị maka nke gị budata n'efu agbanyeghị, ọ na - agbakwunye usoro ịzụrụ ihe n’ime ngwa na - agbakwunye ọrụ ndị ọzọ, ọrụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na - abaghị uru.
Na-eri nri - Onye Nwere Akụkọ Akụkọ
Developer: Otu nri
Enwere ike iwere mpempe akwụkwọ dị ka ezigbo nri. Ngwa a na-egosi anyị isi mmalite niile na usoro akwụkwọ akụkọ na anyị guzobere na mbụ, isi mmalite ndị nwere ike ịbụ akaụntụ Twitter, ndepụta RSS, akaụntụ Facebook ...
Interface Flipboard dị ezigbo mma ma dịkwa mfe iji. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ozi kachasị masị gị na usoro magazine site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, dịka ngwa Flipboard, ị gaghị ahụ ndị ọzọ. Flipboard dị maka gị budata n'efu ma gbakwunye mgbasa ozi.
Ọ bụrụ n'ịchọghị ngwa izugbe ka a gwa gị oge niile nke ihe kachasị amasị gị, ịnwere ike inye Squid ohere, ngwa na-enye anyị ohere ịme n'etiti ihe karịrị otu 100 si n’ihe karịrị mba iri anọ.
Egwuregwu, ejiji, teknụzụ, akụkọ ụwa, nri, sayensị, njem, foto… Bụ otu n'ime ụdị dị iche iche anyị nwere iji nyocha ọdịnaya anyị chọrọ igosi na ngwa ahụ.
Kachasị mma, anyị nwere ike họrọ usoro nke anyi choro igosiputa, ka anyị wee nwee ike ibu ụzọ gosipụta akụkọ kacha masị anyị ịgụ na mbụ. Ọ bụrụ na ọ masịghị isi mmalite ndị agụnyere na otu ahụ, anyị nwere ike iwepu ya dị ka isi iyi nke ozi.
Ọrụ nke anyị na-enweghị ike ịchọta na ngwa ndị ọzọ m kwuru n'elu, bụ ohere kọwaa akụkọ ahụ. Ọ na-etinye wijetị maka ihuenyo ụlọ ma dị maka nbudata kpamkpam n'efu (gụnyere mgbasa ozi).
SQUID - Akụkọ
Developer: Ngwa Squid
Ọ bụrụ na Bekee abụghị nsogbu nye gị ma ịchọrọ ịkọwa ụzọ sitere n'aka otu n'ime isi mmalite ihe ọmụma kachasị n'ụwa, ịnwere ike iji Reddit. Na Reddit anyị nwere ike chọta ozi oge-nkeji na isiokwu ọ bụla Site na njikọ ndị ọrụ kesara na nke ahụ, n'ọtụtụ oge, ndị ọkachamara n'ọhịa na-akwado ya.
Ọ bụ ezie na ibido ọrụ ya nwere ike iyi ihe siri ike, ma ọ bụrụ ị na-eji oge zuru ezu lelee n'ime oge dị mkpirikpi ka Reddit si dị ngwa na-adọrọ mmasị ka a gwa gị maka ihe niile masịrị gị.
Arụsị na mgbasa ozi
Onye ọrụ ọ bụla dị iche, nwere echiche dị iche iche dị iche iche ma na-agakarị na isi mmalite ozi dịka nhọrọ ha si dị, yabụ ekpebiri m etinyela isi mmalite sitere na blọgụ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ akọwapụtara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ozi dịgasị iche site na ụdị isi mmalite na echiche niile, ngwa m gosipụtara n'isiokwu a dị mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-amasị ozi ọma nwere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, egwuregwu ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọN'ụzọ doro anya, dabere n'echiche gị, ịnwere ike ibudata ngwa ahụ site na ọkara ahụ ma ọ bụ gaa na weebụsaịtị ya site na peeji nke ngwaọrụ gị dị ka ụzọ mkpirisi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe egwu egwu 7 kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu kachasị mma na usoro telivishọn